Ingxoxo yokudluliselwa: U-Ibra uzohlwitha iPremier League ngokubuyiselwa kweMilan - Tamban RELAY
Accueil » SPORTS »Ingxoxo yokudlulisela: U-Ibra uzohlwitha iPremier League ngokubuya kweMilan
Ingxoxo yokudlulisela: U-Ibra uzohlwitha iPremier League ngokubuya kweMilan
TELES RELAY 3 December 2019
Amafasitela okudlulisela ku-ligi ebaluleke kakhulu yase-Europe ayavalwa, kodwa akukaze kube kudala kakhulu ukuthi alinde uJanuwari. Chofoza lapha ukubuka okudluliselwe kwakamuva futhi uhlale unolwazi ngezinhlebo zakamuva ezingezansi.
INDAWO YOKUXHESHA: I-Ibra isilungele ukuhamba kwe-AC Milan
Ikusasa lakhe kube ngumthombo wokucatshangelwa okuhlala njalo kusukela kuphele isizini yebhola lebhola leMajor League nokusuka kwakhe kwi-LA Galaxy, kepha Telegraph kubika ukuthi UZlatan Ibrahimovic manje sekubonakala sengathi uzojoyina i-AC Milan, yize edonse amehlo emnothweni wamakilabhu amaningi ePremier League.
I-2 Bona futhi
Isithakazelo esiboniswe yi-England asikaze sijike ikhanda futhi manje usebonakala elungele ukujoyina ikilabhu abekade ehlala kulo amasizini amabili phakathi kwe2010 ne2012. [I-19659008] Iphephandaba libika ukuthi ukudluliselwa kwakhe kuma-giants ase-Italy kwamukelwe ngokomthetho nokuthi uzoba nesivumelwano kuze kuphele isizini ukuze enze umthelela ku-Serie A, abasiki bengqephu abadinga ukubuyiswa intshi endaweni yabo ye-11th etafuleni.
UGiroud usezohamba neChelsea ngoJanuwari
Umgadli waseFrance Olivier Giroud kufanele isuke eStamford Bridge ngoJanuwari, ngenkathi iklabhu isilungele ukulalela ukunikezwa komuntu owile UTammy Abraham et Michy Batshuayi ngokulandelana kwezikhundla kweChelsea.
Yilokho i I-Daily Mail Iphephandaba libike ukuthi uGiroud uzoba nomdlandla njengeChelsea ukwenza lesi sivumelwano ukuthi sigcwaliswe ngenxa yokuntuleka kwakhe kweqembu lokuqala neqiniso lokuthi usadlala indima enkulu emidlalweni yaseFrance emiqhudelwaneni ye-European Championship. ehlobo elilandelayo.
Inkontileka kaGiroud yamanje isebenza kahle ekugcineni kwesizini yize enze isiqalo sakhe sokuqala UFrank Lampard . kusukela ngo-Agasti bebhekene neWest Ham kule mpelasonto, akukho okukhombisa ukuthi uzodlala indima ekuholeni nesiwombe sesibili somkhankaso.
Ubuye wabonakala ekude kakhulu ne-West Ham ngenkathi i-Chelsea iboshiwe. ukuhlulwa ekhaya ngokumelene nezimbangi zabo iLondon.
I-Inter p inikeza ukulungisa iChiesa
Kungenzeka ukuthi i-Inter Milan ihole ukuma kweSerie A, kepha iqembu labo alinakho ukujula okudingekayo ukuze badlale lesi sicoco ngeJuventus eyenziwe nzima. Futhi yilokho okukhathaza u-Antonio Conte nomkhandlu wekilabhu.
Kungakho belungele ukwenza iFiorentina Federico Chiesa ngokusho Ibhola . Kuthiwa uConte ucabanga ukuthi umdlali weminyaka ye-22 angafanelana kahle nesitayela somdlalo wakhe Nerazzurri futhi ihlatshwa umxhwele ngamakhono akhe obuchwepheshe.
Ukuphetha ukubhekana ubuso nobuso, i-Int inganikela ngama-euro ayizigidi ezingama-30 ngokungeziwe Dalbert obedlala kuwo wonke amakilabhu ngaphandle kweqembu elilodwa La Viola zesizini, ebolekiswe yiSan Siro, kanye ne-26- iwina yonyaka owodwa Matteo Politano .
Umbiko uveza ukuthi abaholi be-Series A bazokhulisa imali yebhizinisi likaJanuwari ngokuthengisa abathengisayo UGabriel Barbosa okuxhaphaze okwenzekile eFlamengo. Ukunqoba kweCopa Libertadores kwaphenduka amakhanda nhlangothi zombili ze-Atlantic.
- Imibiko e-Italy iphakamisa ukuthi iManchester United ne-Arsenal bakulungele impi yokusayinwa kukaDavive osemncane Merih Demiral . 19659030]. Ibhola uthi umNtaliyane "uvulelekile ethembeni lokushiya isalukazi ngoJanuwari" ngemuva kokuthola amathuba eqembu lakhe lokuqala anqunyelwe iJuventus kuze kube manje kule sizini.
- U-Pep Guardiola, umqeqeshi weManchester City, usekhiphe isinqumo ukwenza amasiginesha amasha ngoJanuwari . Idolobha lihlulekile ukusayinda indawo yelinye UVincent Kompany ehlobo, kodwa u-Guardiola ugcizelele ukuthi ngeke baphaze imali ngokushesha nje lapho kuvulwa iwindi lokudlulisa ngoJanuwari.
Lesi sihloko sivele kuqala (ngesiNgisi) http://espn.com/soccer/blog-transfer-talk/story/4005048/transfer-talk-zlatan-ibrahimovic-to-snub-premier-league-for-ac-milan-switch
U-Alexi Lalas: UKlinsmann usengubuso bokuqola ibhola laseMelika (VIDEO)
Umthombo: UTim Howard uzoba nguMqondisi-Jikelele we-USL
ABANTU & LIFESTYLE8,536